चलचित्र ‘द म्यान फ्रम काठमाडौं’ मा जोसेसँग आनाको यस्तो छ रोमान्स ! – Everest Dainik – News from Nepal
चलचित्र ‘द म्यान फ्रम काठमाडौं’ मा जोसेसँग आनाको यस्तो छ रोमान्स !
अन्तर्राष्ट्रिय बजारका लागि निर्माण गरिएको नेपाली फिल्म ‘द म्यान फ्रम काठमाडौं’ चैत १ गतेबाट प्रदर्शनमा आउने आएको छ । नेपाल प्रदर्शन पश्चात् विदेशमा फिल्मको प्रदर्शन गरिने निर्माता नकिम उद्दिनले जानकारी दिएका छन् । उनी क्यूएफएक्स सिनेमाज् प्रमुख समेत हुन् ।
सिरिजको रुपमा ल्याउने तयारी भइरहेको यस फिल्मको बिहीवार राजधानीमा एक कार्यक्रमका बीच रोमान्टिक पोस्टर, गीत र ‘एक्सन यूक्त’ दोस्रो ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । पोस्टरमा फिल्मका दुई लिड कलाकार जोसे म्यानुअल र आना शर्मालाई रोमान्टिक अन्दाजमा देख्न सकिन्छ ।
फिल्मको सार्वजनिक ‘आकाशै घुमेर…’ बोलको गीतमा पनि यो जोडी फिचर्ड छन् । गीतमा निकिता श्रेष्ठ र जसोन कुँवरको स्वर छ भने गायक कुँवरकै शब्द तथा संगीत सुन्न सकिन्छ । यस फिल्मलाई पेमा धोन्डुपले निर्देशन गरेका हुन् । नेपाल र अमेरिकामा फिल्म खिचिएको हो ।
नेपाली कथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई देखाउन र सुनाउन आफूहरु उत्साहित रहेको कार्यक्रममा निर्माता उद्दिनले बताए । उनी भन्छन्, ‘नेपाली फिल्मले अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा स्थान पाउनुपर्छ भन्ने सोचका साथ हामीले यस फिल्ममा एउटा सिन्सियर प्रयास गरेका छौं ।’
यस्तो छ जोसेसँग आनाको रोमान्स हेर्नुहोस् भिडियो-